4 xiiso leh oo ku saabsan duufaannada | Saadaasha Shabakadda
Waan jeclahay duufaannada Waxay si weyn u burburin karaan, laakiin waxaan u maleynayaa inaadan ka cabsan iyaga laakiin ixtiraam. Markaa waxaan diyaar u noqon karnaa inaan fahamno, si aan u darso, taas oo naga caawin doonta inaan si saxa u saadaalino iyaga, kana fogaano cawaaqib xumo.
Dhacdooyinkaan saadaasha hawada ayaa ahaa kuwa halyeeyada u ah filimada qaar, sida kuwa Twister ama midka indhaha cirifka. Laakiin maxaad ka ogtahay iyaga? Halkan waa inaad haysataa 4 xiiso leh oo ku saabsan duufaannada taasi, hubaal, inay kaa yaabiso.
1 1.- Mareykanka, meesha ay duufaannada badanaa ka dhacaan
2 2.- 500km / saacaddii, xawaaraha cajiibka ah ee dabaylaha duufaanka
3 3.- Tornado-yada mararka qaar waxay u safraan kooxo
4 4.- Weligaa ha dhayalsan xoogga duufaanta
1.- Mareykanka, meesha ay duufaannada badanaa ka dhacaan
Gobolkan ka mid ah duufaannada adduunka ayaa ku badan bilaha gu'ga (Abriil-Maajo). In badan baa la soo saaray oo la aaminsan yahay taas 75% ka mid ah ayaa halkaa lagu sameeyay, gaar ahaan Waddada loo yaqaan 'Tornado Corridor', oo ah aag ay ku jiraan qaybo ka mid ah Texas, Oklahoma, Kansas iyo Nebraska.
Xagey sameysaa 25% duufaanada hadhay? Dunida oo idil marka laga reebo Antarctica.
2.- 500km / saacaddii, xawaaraha cajiibka ah ee dabaylaha duufaanka
Dabaylaha ugu xoogan waxaa laga dhaliyaa duufaan. Si sax ah looma qiyaasi karo weli, laakiin qiyaas ayaa la samayn karaa. Sidaas darteed, waxaa la ogaan karaa in dabaysha duufaanta ka samaysantay Oklahoma ee 1999 ay ku dhacday xawaare aan caadi ahayn oo ah 500km / saacaddii.
3.- Tornado-yada mararka qaar waxay u safraan kooxo
Waa waxa loo yaqaan »Wave of tornadoes» ama Tornado Outbreak oo Ingiriis ah. Mareykanka gudihiisa waxay ka sameysan karaan kooxo ilaa 24, inkasta oo waxa caadiga ahi yahay inay yihiin min 6 ilaa 10.
4.- Weligaa ha dhayalsan xoogga duufaanta
Sida aad u jeceshahay dhacdooyinkan, haddii aadan raacayn gaari habboon iyo haddii aadan aqoon sax ah lahayn, uma baahnid inaad aad ugu dhowaato. Ujeeddadu waa in had iyo jeer la joogo masaafo ka weyn 2km. Maskaxda ku hay marwalba in duufaannada, haddii ay daran yihiin kuwa F4 ama F5, ay qarxin karaan gawaarida waaweyn, baabuurta, dumiyaan guryaha, geedahana rujin karaan.
Sideed u aragtaa duufaannada? Ma jeceshahay iyaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » 4 xiiso leh oo ku saabsan duufaannada